दु:खद खबर ! बि'रामी बोकेको एम्बुलेन्स दु'र्घटनामा दुई जनाको मृ'त्यु, थप घा'इते - Prateek Nepal
August 30, 2020 August 30, 2020 Ramash kunwarLeaveaComment on दु:खद खबर ! बि’रामी बोकेको एम्बुलेन्स दु’र्घटनामा दुई जनाको मृ’त्यु, थप घा’इते
काठमाडौं । एम्बुलेन्स दु’र्घटना हुँदा दुई जनाको मृ’त्यु भएको छ । जानकारी अनुसार दुई ग’म्भीर घा’इते भएक छन् । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–५ माझकोटको वालिङ चापाकोट भित्री कच्चि सडकमा एम्बुलेन्स दु’र्घटना हुदाँ दुई जनाको नि’धन भएको छ भने दुई ग’म्भिर घा’इते भएका छन् । चापाकोटबाट बि’रामी काठमाडौ पु¥यार फर्कने क्रममा बा २ झ ४०११ नम्बरको एम्बुलेन्स सडकबाट अन्दाजी २५० मिटर तल खस्दा दु’र्घटना भएको हो ।
एम्बुलेन्स दु’र्घटनामा चापाकोट नगरपाकिला ९ का ३५ बर्षिय भानुभक्त गैरे र वडा नम्बर १० का २५ बर्षिय श्याम पंगेनीको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जानाकारी दिएको छ । दु’र्घटनाामा घा’इते गैरे र पंगेनीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारको क्रममा नि’धन भएको हो ।
दु’र्घटनामा एम्बुलेन्स चालक चापाकोट ९ का ३१ बर्षिय सुरेन्द्र भण्डारी र २८ बर्षिय पवित्रा पोख्रेल ग’म्भिर रहेको अधिकारीले बतााउनुभयो । घा’इते दुबै जनाको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङमा उपचार पश्चात थप उपचारको मनिपाल शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । प्रहरीका अनुसार दुर्घ’टना के कति कारणले भयो भनेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अन्तत : वरिष्ठ लोकगायक प्रेमराजा महत दम्पतिले को’रोनालाई यसरी परास्त गरे !
घरमा राख्नुस् यी ६ मध्ये कुनै एक चीज, कहिलै हुँदैन् धनको अ’भाव !
काठमाडौंको मुटुमै घ’ट्यो फेरि अर्को ड’र’लाग्दो घ’ट’ना, यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो एक पुरुषको श’व
संघीयता आवस्यक नभएको प्रमाणित भैसक्यो, खारेज गरौँ: कमल थापा